China Mini borosy volo miaraka amin'ny fehikibo vita amin'ny fingotra miloko, uv herinaratra, famindrana rano ary mpanamboatra | Yongsheng
Volom-bolo kely misy sarona fingotra miloko, uv herinaratra, famindrana rano
Material: ABS ， Rubber ， Nylon, boribory
Fonosana mahazatra: borosy tsirairay amin'ny kitapo misy nylon misokatra. 24PCS / boaty anatiny. 240PCS / baoritra.
Haben'ny portable kely - Petite habe azo itehirizana, mety tsara amin'ny fomba fiainanao andavanandro. Tazomy ao anaty kitapo anao ny finday rehefa mandeha. Ny borosy volo kely dia miasa tsara amin'ny volo lena na maina ary mety tsara ho an'ny lehilahy sy vehivavy ary ankizy. Ataontsika kely kokoa, borosy ary lavorary ho an'ny fiainana eny an-dalana ny borosy. Petite habe azo itehirizana mora, ao anaty poketranao, ary tian'ny ankizy koa izy io .Ny borosy io dia miasa tsara amin'ny volo lena na maina. Mety ho an'ny vehivavy, lehilahy sy ankizy, volo lava na fohy, volo manify na matevina.
Ny Little Detangler Hair Brush dia manasongadina Exclusive, ny volombava mahery dia manotra moramora ny loha rehefa manentana ny fikorianan'ny rà sy manamafy ny volonao
Ny Squirt Detanglers dia novolavolaina tamim-pahakingana mba hampihenana ny fanaintainana sy hiarovana ny volo amin'ny tendrony sy ny triatra. Mamela anao hiborosy hery kely kokoa ianao mba hahafahanao miala volo miaraka amin'ny fahasimban'ny volo.
Ary manana karazana endrika maro isan-karazany isika ao an-doha sy ny tahony azo voafidy. Ny fikirakirana amin'ny fangejana malefaka dia mety ho mora tantanana. Ny loha samihafa dia azo ampiasaina amin'ny seho maro sy amin'ny vokatra rehetra tadiavinao.
Famolavolana sy famolavolana mora azo mora entina. Ny habe kely dia mifanaraka tsara amin'ny paosy, kitapo, kitapo. Mety amin'ny dia, daty, fiantsenana, mivoaka.
Previous: Borosy volom-bolo vaovao malaza
Manaraka: Volom-bolo boribory matihanina miaraka amin'ny fanoherana ny hafanana avo lenta amin'ny fomba samihafa
Borosy volo azo ampiasaina
Fanosotra volo borosy hazo
Borosy volo vita amin'ny hazo manokana
Borosy volo vita amin'ny hazo vita amin'ny hazo toradroa